डा. केसीका माग ३ करोड नेपालीका हुन्, हामी पछि हट्दैनौँ – Health Post Nepal
२०७५ माघ १७ गते ११:०२
नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
डा. केसीको आमरण अनशनलाई चिकित्सक संघले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको छ । डा. केसीले उठाएका माग सबै जायज छन्, सरकारले सबै माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैकारण हामी अहिले उहाँको जीवनरक्षाका लागि रिले अनशन बसिरहेका छौँ ।
सरकारलाई दबाब दिन बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म रिले अनशनमा छौँ । यदि सरकारले कुनै सहमति वा डा. केसीका माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेन भने केही समयपछि बन्दका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।
सरकारले वार्ताटोली बनाए वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । डा. केसीको १५औँ अनशनका वेला भएको सम्झौताअनुरूप चिकित्साशिक्षा विधेयक आउनुपर्छ ।
१६औँ आमरण अनशनको आज २३औँ दिन भइसकेको छ । सरकारबाट वार्ताका लागि कुनै कदम चालिएको छैन । तर, चिकित्सक संघले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन भन्ने आरोप छ नि ?
अनशन भनेकै सबैभन्दा कडा आन्दोलन भनेर बुझ्नुपर्यो । एक त गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेकै सबैभन्दा कडा हो, त्योभन्दा कडा आन्दोलन अरू कुनै हुन सक्दैन । तैपनि सरकारलाई झकझकाउनका लागि डाक्टरहरूका केही संगठनसहित डा. केसीको समर्थनमा रिले अनशन बसिरहेका छौँ ।
सरकारले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको भनेको छ । ५ प्रतिशतचाहिँ हामी यति दिनपछि गर्छौं भनेर डा. केसीलाई विश्वास दिलाएर यो सत्याग्रहलाई तोडियो भने चिकित्सक संघ पनि यो आन्दोलनबाट पछि हट्नेछ । होइन भने डा. केसी नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनरक्षाका लागि हामी अनन्तकालसम्म लडाइँ गरिरहनेछौँ । यसबाट हुने क्षतिप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । जबसम्म समस्या समधान हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । चिकित्सक संघले कहिल्यै खुट्टा कमाउँदैन । हामी धेरै आन्दोलन पार गरेर आएका हौँ । दुईतिहाइको सरकारसँग कुनै सरोकार छैन ।
हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ । सरकारलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने अन्य थप सशक्त र कठोर कार्यक्रम पनि हुन्छ ।
रातारात मुठ्ठीभर मानिसको इच्छा पूरा गर्न यत्रो सदन र सरकार फसेको छ । त्यहाँबाट उम्काएर नेपालीलाई स्वाभिमानी बनाउन, कहिल्यै दास नबनेको नेपालीलाई झुक्न नदिन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ ।
दुईतिहाइको सरकार मात्र होइन, संसारमा ठूला–ठूला बादशाह पनि ढलेका इतिहास छन् । हामी दुईतिहाइको सरकार हो भनेर कसैले दम्भ देखाउँछ भने त्यसको नतिजा कुनै दिन आउँछ ।
चिकित्सकहरूको रिले अनशनमा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको सुन्नमा आएको छ नि ?
सरकार समस्या समधानतर्फ लागेको छैन । डाक्टरलाई पनि केही प्रलोभनमा पारेर, चिकित्सक संघविरुद्ध संगठन खोलाएर केही मानिसलाई पत्र–पत्रिकामा बोल्न लगाउने, अर्को कुरा फेरि धम्की दिने, तर्साउने, डर देखाउनेलगायत हरकिसिमको हतकन्डा सरकारले अपनाइरहेको छ । सरकारलाई कुबुद्धि लागेको छ । म के भन्छु भने सरकार त्यस्तो किसिमको कुबुद्धि त्यागेर समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढ््नुपर्छ ।
सरकारले कुनै पनि खाले डर देखाएर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ । इतिहासले नै बताउँदै आएको छ । चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिसकेपछि ठूला परिवर्तन भएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म डा. केसीसँग आएर यी माग पूरा भए, यी पूरा भएनन् भनेर भन्न सक्ने आँट गरेको छैन । यसबाट नै के बुझिन्छ भने सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले अनेककिसिमले पेल्न खोज्छ नै, त्यो उसको काम पनि होला । तर, हामीले सरकारले भन्यो भनेर आफ्ना कार्यक्रम छोड्ने कुरा हुँदैन । हामी निरन्तर अघि बढिरहन्छौँ । आन्दोलन नगर्नुस्, कारबाही हुन सक्छ भनेर धम्क्याउने त गरिरहेकै छ । सरकारले जुनसुकै अस्त्र पनि प्रयोग गर्न सक्छ । तर, हामी पछि हट्दैनौँ ।
स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता नै कार्यान्वयन भएन, प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भनेको यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पद हो । त्यो पदबाट बेइमानी हुनुहुँदैन । यो पद त ३ करोड नेपालीको विश्वासको आधार हो । संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पद भनेकै प्रधानमन्त्री हो ।
त्यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले पदको मर्यादा ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने, उहाँ सधैँ आजीवन पदमा रहने होइन । केही समयपछि अर्को कुनै व्यक्ति आउँछ । त्यसकारण, अहिले हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले यो पदको गरिमामा आँच नआओस् । त्यसकारण अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदको गरिमा राख्नका लागि पुनः विचार राख्न अनुरोध गर्छु । होइन भने दुईतिहाइको सरकार मात्र होइन, संसारमा ठूला–ठूला बादशाह पनि ढलेका इतिहास छन् । हामी दुईतिहाइको सरकार हो भनेर कसैले दम्भ देखाउँछ भने त्यसको नतिजा कुनै दिन आउँछ ।
डा. गोविन्द केसीले राखेका माग ३ करोड नेपालीको मर्म र भावनालाई छुने माग भएकाले सबै जनता सडकमा उत्रिन थाल्छन् र सानो आगोको झिक्को जब ठूलो भएर जान्छ, त्यसपछि कसैको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि भोलि पश्चात्ताप हुन सक्छ ।
चिकित्सक संघबीच नै एकमत छैन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
चिकित्सक संघ एउटै संगठन हो, यसमा दुईमत छैन । तर, कुनै–कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कतै पार्टीनिकट भएर सरकारको पक्षमा हिँडिरहेका होलान्, त्यस्ता स्वार्थप्रेरित मानिसलाई लिएर दुईमत भएको भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म चिकित्सक संघको निर्णयविरुद्ध कसैले पनि आवाज उठाएको छैन ।
चिकित्सक संघको निर्णयविरुद्ध वा बाहिर जाने सदस्यलाई कारबाही हुन्छ ?
चिकित्सक संघका जुनसुकै सदस्य संगठनको मर्यादा वा निर्णयविपरीत जान्छ भने त्यस्तालाई विधानअनुसार कारबाही हुन्छ ।
डा. केसीको मागमा समर्थनमा संघले यो भन्दा कडा आन्दोलन घोषणा गर्दा सबै चिकित्सकको साथ पाउँछ त ?
अहिले हामीले गरिरहेको रिले अनशन हो । यसमा सबै चिकित्सक आउने कुरा भएन । त्यसकारण काममा बाधा नपारीकन रिले अनशनमा बसिरहेका छौँ । तर, सरकारले अझै पनि टेर्दैन र हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठान्छ भने संघका सबै सदस्य एकजुट भएर आन्दोलनमा समावेश हुनेछन् ।
सरकारले प्रहरी लगाएरै रिले अनशनमा बसेका चिकित्सकलाई गिरफ्तार गर्न वा अनशनबाट हटाउन खोजेको कुरा साँचो हो ?
हामीलाई हटाउन खोजेको हो । तर, हामीले के भनेका छौँ भने हटाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता छ भने हामीलाई थुनुवा पुर्जी दिएर थुन । हामी जे गर्न पनि तयार छौँ । प्रहरीले अस्पताल हाताभित्र शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्न हुँदैन भन्दै आएको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले वार्ता वा सहमतिका लागि कुनै कदम चालेजस्तो देखिँदैन । डा. केसीको स्वास्थ्य भने दिनप्रतिदिन खस्किँदै छ । यस्तोमा चिकित्सक संघले सरकारलाई दबाब दिन कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ त ?
हामी अझै थप कडा आन्दोलन गर्छौं । बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । सरकार संवेदनशील बनेन भने सबै स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्नेसम्मको कठोर अप्रिय निर्णय लिन हामी बाध्य हुनेछौँ र लिनेछौँ । मानवीयताका हिसाबले हामी आकस्मिक सेवा बन्द गर्न सक्दैनौँ । तर, आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्छौं ।
चिकित्सक संघले सधैँ मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । अबको निष्कर्ष कसरी आउने देखिन्छ ?
डा. केसीको १५औँ आमरण अनशनमा भएको सम्झौता पूरा गर्नु नै अबको निष्कर्ष हो । चिकित्सक संघको अनुरोध भनेको सरकारले तुरुन्त वार्ता समिति बनाएर यस विषयको हल गर्नुपर्यो भन्ने हो । त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताका रूपमा जस्तोसुकै भूमिका खेल्न चिकित्सक संघ तयार छ ।